Pasina mhedzisiro yebhizinesi, yako agency haina basa. Saiti yakagadziriswa isingakwanise kushandura haina basa. Saiti yakanaka isingawanikwe haina basa. Kutsvagisa, dhizaini uye kunyora iwe unobhadhara zvakanyanya kune izvo zvausingakwanise kuzvidzorera zvakare hazvina basa (kupfuura iro rekutanga bhuku).
Tiri kuramba tichishamisika nenhamba yevatengi vanouya kwatiri vakashandisa rinenge bhajeti ravo rese asi vasiri kuona mhedzisiro. Izvo zvinotarisirwa kwatiri kutora chero mari yasara uye kuyedza kuwana zvibereko nazvo. Dzimwe nguva, hatigone kuita kuti zvishande.
Ndicho chikonzero bhizinesi redu modhi iri rakasarudzika muindasitiri. Isu tinobhadharisa zvakadzama mubhadharo wekubatana tobva tashanda kumhedzisiro. Vazhinji vedu vatengi vari kushandisa mari yemushandi mumwe chete, asi timu yedu uye vese vatinoshanda navo vanoshanda kuti vaone zviyero zvebhizinesi zvakaenzana.
Usati wasaina kontrakiti yako inotevera nesangano, tinokukurudzira kuti ubvunze mibvunzo inotevera:
Ndevapi vamwe vatengi vavakashanda navo muindastiri yako? Unogona kufunga kuti ndiri kubvunza nezvekupokana kunogona kumuka, asi handicho chete chikonzero. Yedu boka inoramba iine kubudirira kusinganzwisisike nekambani yekushambadzira tekinoroji inoenderana asi isu takawira pasi nemamwe makambani eB2C echigadzirwa Nechikonzero ichocho, isu tinotarisa pachikamu chimwe uye chero munhu anoda kushanda nesu kunze kwechikamu ichocho anonyatso ruzivo kuti ave nechokwadi chekuti tinogona kuzadzisa zvavanotarisira.
Chii chinoitika kana chisingashande? Sangano rega rega rinosimudzira iro rakakura basa ravanoita asi havawanzo kutaura kune zvakakundikana. Isu takave nemugove wedu futi. Mubvunzo ndewezvinoitika zvinotevera. Kana iwe uri kushanda pane chengetedzo, iwe ungatofanira kubhadhara zvese zvekare pamwe neazvino agency kana nyowani kuyedza kuwana izvo zvaunoda. Isu tinoshanda takabhadharisa muripo kuitira kuti kumanikidzwa kuri patiri kuendesa. Uye mune yakaipisisa-mamiriro ezvinhu, vatengi vedu vanozivawo matangiro atinoita zvibvumirano vasati vasaina (isu tinoita kuzere kuzere kwesarudzo, kuripota, zvinyorwa, uye zvinhu).
Chii chakabatanidzwa, chii chimwezve? Ini ndafuridzirwa nemakambani mangani anovhura masayiti kana mazano chete kuti ndione kuti chirongwa hachina kugadzirirwa kutsvaga kana nhare. Kana yapikiswa, iyo agency inopindura, "Hauna kukumbira izvozvo." Huh? Warevesa here? Kana agency yako iri kutsvaga vatengi vako, iwe unoenda kuomerera pakuita zvese kuti uwedzere mhedzisiro yebhizinesi.
Isu tinobata sei muridzi? Zvakanaka kana iwe uine agency inotenga madomeni, kuitisa, madingindira, kana stock stock photography… asi ndiani ari wavo? Iko hakuna chakashata kupfuura iyo agency kuwana isingateereri uye kufamba uchienda nedomain yako (ehe, zvichiri kuitika). Ive neshuwa kuti iwe une ironclad chibvumirano munzvimbo kuti chero muridzi ndeyako. Ndosaka tichiwanzo kuwana kiredhiti kadhi kubva kune vatengi vedu uye tinotenga masevhisi muzita ravo. Kuve nekero email kero uko iwe kwaunogona kuwedzera / kubvisa yako agency ndiyo nzira yakanaka yekugadzirisa iwo maakaunzi uko iwe ausingazombofa waarasa iwo.
Ndezvipi zvishandiso zvavari kushandisa? Kunyangwe isu pachedu takachenesa mamwe mapuratifomu evatengi vedu, isu tichiri kuvhura uye kutendeseka navo pane maturusi atiri kushandisa. Mukana wekuve agency ndeyekuti isu tinogona kutenga mabhizinesi marezinesi pane software iyo yatinoshandisa kune akati wandei vatengi. Ndega, vatengi vedu vaisazokwanisa kuzvitenga asi pamwe chete tinogona kuvapa mukana. Izvi hazvingopi vatengi vedu chete nekunzwisisa kwekukosha kwatiri kugeza, zvakare ngavazvionere vega mhando nemukurumbira wezvishandiso zvatiri kushandisa.
Ndezvipi zvimwe zvavanogona kukubatsira? Zvakanaka - Ndanga ndisina kunaka kusvika zvino saka ngatitangei kuva netariro. Iwe unogona kushamiswa dzimwe nguva neakakura matarenda uye mapurojekiti ari pasi pebhandi rebazi. Imhosva yedu pachedu, asi dzimwe nguva tinoona mutengi wedu aripo akangotsvaga imwe zviwanikwa zvebasa zvataigona kunge takavapedzera. Hapana chimwe chinogumbura! Ita shuwa kuti urikutaurirana nemasangano ako pane rakakura basa ravari kuitwa uye dzimwe dzenzvimbo dzekutarisisa dzavanadzo. Sezvo iwe uchitova nehukama, kuwedzera pane mamwe masevhisi uye mapurojekiti kazhinji zviri nyore kwazvo pane kutanga nyowani nezviwanikwa zvitsva.
Isu takagovana inonakidza infographic kwekanguva kumashure pane dzimwe nguva kushungurudza hukama hwevatengi ayo masangano anopinda. Asi kushungurudzwa kunogona kuitika kumagumo ese ehukama uye zvakakosha kuti usashungurudzwa nesangano rako. Kwete chete kuti mazano ako anogona kutambura, asi iwe unogona kurasikirwa nebhajeti yako futi.
Ini ndinofunga izvi zvese zvinogona kupfupikiswa mumubvunzo mumwe. Sangano rako riri kushanda here kuona yako bhizinesi mhedzisiro kana yavo? Tinotenda kana vatengi vedu vachibatsirwa, saka nesuwo… saka ndizvo zvinogara zviri pamberi pedu.